दशैं मनाउन विदेशबाट घर फर्किंदै हुनुहुन्छ ? यी सामान ल्याए भन्सार तिर्नु पर्दैन - Recent Nepal News
सोमबार, आश्विन २९, २०७५
दशैं मनाउन विदेशबाट घर फर्किंदै हुनुहुन्छ ? यी सामान ल्याए भन्सार तिर्नु पर्दैन
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २२, २०७५ समय: १४:५९:५४
काठमाडौं,असोज २२ – हिन्दू नेपालीहरुको ठूलो पर्व दशैंमा विदेशबाट घर फर्किनेहरु बढी नै हुन्छन् । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा लामो समयदेखि देशबाहिर रहेका नेपालीहरुले उपहार र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सामनहरु ल्याउने गरेका छन् । यद्यपि दशैंमा घर फर्किदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट के कस्ता सामान कति मात्रामा ल्याउन पाइन्छ भन्नेमा सबै जानकार नहुँदा अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
त्यसैले विदेशबाट घर फर्किँदा सुडकेश भरिउञ्जेल सामान ल्याउने दबाब हुन्छ तपाईंलाई । नेपाल सरकारको कानूनले प्रतिबन्ध गरेका सामान बोकेर आउनुभयो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमै तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ ।
अनि के कानूले प्रतिबन्ध नगरेका वस्तुचाहिँ मनलाग्दी ल्याउन पाइन्छ त । सरकारले एक व्यक्तिले यतिभन्दा बढी सामान ल्याउन नपाइने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । कतिपय सामनहरुमा भने सरकारले भन्सार नै लिँदैन । त्यसैले विदेशबाट नेपाल आउँदा भन्सार तिर्नुनपर्ने सामान ल्याउनु भयो भने तपाईंलाई फाइदा हुन्छ ।
के-के ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन ?
विदेशबाट आउनेले भन्सार तिर्न पर्ने नपर्ने बस्तुहरुको सम्वन्धमा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा स्थानीय बसोबास गर्ने नागरिकले विदेशमा गई फर्कँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा पूर्ण भन्सार छुट हुने गरेको छ। जसमा लुगाफाटा, बरबिछ्यौनादेखि गृहस्थीका पुराना सामान र औषधि उपचार गराई नेपाल फर्केका विरामीले ल्याउने औषधिमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै शारीरिक रुपमा अशक्तले सहाराको रुपमा प्रयोग गर्ने सामान, बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक–एक थान ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। विदेसिएकाले घडी, स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोवाइल फोन, पेन ड्राइभ, ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटर एक–एक थान ल्याउन सक्नेछन्। सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र एक लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित साथमा ल्याएको गहना गुरियामा भन्सार छुट रहेको छ। तोकिएभन्दा बढी ल्याएमा ऐनअनुसार कारबाही तथा जरिवाना हुने कार्यालयले जनाएको छ।
एक लिटरसम्मको मदिरा बोत्तलमा भन्सार शुल्क लाग्दैन। त्योभन्दा बढी परिमाणमा ल्याए जफत हुन सक्नेछ। नेपाल प्रवेश गरेको मितिले तीन महिना भित्र भन्सार गोदाममा सीमितभन्दा बढी ल्याएको सामान दाखिला हुनुपर्ने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। टेलिभिजन, म्युजिक सिस्टम, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, पंखा, रेडियो एक–एक सेटसम्म ल्याउन पाइनेछ।
पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरु एक–एक थानमा पूर्ण भन्सार छुट छ। डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीको खेलकुद सम्बन्धी सामान फुटबल, भलिबल, ब्याटमिन्टन सेट, गवैयाको सामान्य बाजा जस्तै– गितार, हार्मोनियम, तबला, जस्ता सामानहरु पनि पूर्ण भन्सार छुटमा ल्याउन सकिन्छ।
यस बाहेक १० किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार ल्याउन पाइने छ। कुनै नेपाली नागरिकको विदेशमा बसोबास गरिरहेको समयमा मृत्यु भएको हो भनी प्रमाणित भएमा पनि निज र निजको परिवारले निजी प्रयोग गरेको पुराना सामानहरु (सवारी साधन बाहेक) स्वदेशमा फिर्ता ल्याउँदा पनि सम्पूर्ण महसुल छुट हुने भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले दिएको सुविधाभन्दा बढी सामान ल्याउँदा भने तोके बमोजिमको महसुल तिर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। तर कुनै यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी कुनै सामान लुकाई छिपाई ल्याउने वा लैजाने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने छ।